နေ့စဉ်သောက်ရမယ့် တားဆေးတွေကို မေ့ပြီးမသောက်မိတဲ့အခါ.... - For her Myanmar
တစ်ရက်သောက်ဖို့မေ့သွားရင် နှစ်လုံးပူးတစ်ပြိုင်တည်း သောက်လိုက်ရမှာလား
အလုပ်များတဲ့ ခေတ် ၊ အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ရတဲ့ တားဆေးကိုသောက်ဖို့ ယောင်းတို့အနေနဲ့ စဉ်းစားရမှာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ” ငါ တစ်နေ့တစ်လုံး ဆေးပုံမှန်သောက်နိုင်ရဲ့လား? ” ” မမေ့မလျော့ရော သောက်နိုင်ရဲ့လား?” ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးမှ တားဆေးသောက်သင့်ပါတယ်။ တားဆေးရဲ့ သဘာဝအရ ပြင်ပဟော်မုန်းနဲ့ မျိုးဥမကြွေအောင်လုပ်ပေးထားတာမို့ ပုံမှန်ဆေးသောက်မှသာ ကိုယ်ဝန်တားတဲ့ အာနိသင်ရစေတာမို့ပါ။
ယောင်းတို့အနေနဲ့ ဆေးတစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ဖို့ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သောက်ဖို့ မေ့တာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားမှာလားဆိုရင်?? တားဆေးသောက်ဖို့ တစ်ရက်မေ့သွားတယ်။ ( တားဆေးတစ်လုံးမသောက်မိဘူးဆိုရင်) – သိသိချင်းအချိန်မှာ မေ့သွားတဲ့အလုံးကိုသောက်ပါ။ အရင်ညက သောက်ဖို့ဆေးကို မနက်မှ သတိရရင် သတိရတဲ့အချိန်မနက်မှာ မေ့တဲ့အလုံးကိုသောက်ပါ။ ပုံမှန်သောပ်နေကျ ညဘက်မှာလည်း တစ်လုံးထပ်သောက်ပါ။ အဲ့ဒီနေ့အတွက်တော့ နှစ်လုံးဖြစ်သွားမှာပါ။
တားဆေးသောက်ဖို့ နှစ်ရက်မေ့တယ်ဆိုရင် – သိသိချင်းမှာ ဆေးတစ်လုံးပြန်သောက်ပါ။ အဲ့ရက်မှာပဲ ပုံမှန်သောက်နေကြအချိန်မှာ တစ်လုံးပြန်သောက်ပါ။ ***သတိထားဖို့က တားဆေးနှစ်လုံးမေ့တာမို့ ကိုယ်ဝန်မရဖို့ သိပ်အာမခံလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၇ရက်တိတိ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲနေတာ ။ ကွန်ဒုံးသုံးပြီးဆက်ဆံတာတွေနဲ့ ထပ်ပြီးကာကွယ်ရမှာပါ။
နောက်သိထားရမယ့်အချက်ကတော့ တားဆေးကဒ်ရဲ့ ၃တန်းမြောက်မှာ ဆေး ၂ရက်သောက်ဖို့မေ့တာဆိုရင်တော့ ၃တန်းကို ကုန်တဲ့အထိသောက်ပြီးတာနဲ့ အားဆေးပါဝင်တဲ့ အောက်ဆုံးအတန်းကိုမသောက်ဘဲ နောက်ကဒ်အသစ်သောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တားဆေးသောက်ဖို့ ၃ ရက်မေ့ပြီဆိုရင် – သိသိချင်းမှာ တစ်လုံးသောက်ပြီး ကျန်တာတွေကို ပုံမှန်အတိုင်းဆက်သောက်ပေးပါ။ * ဒီလိုမေ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေများတာမို့ ၇ရက်တိတိ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဖို့ ကွန်ဒုံးသုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရေးပေါ်တားဆေးသောက်ဖို့လည်း လိုအပ်နိုင်တာမို့ ဆရာဝန်နဲ့လည်းသွားရောက်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ၃လုံးမေ့တာဟာ ဆေးကဒ်ရဲ့ တတိယအတန်းမှာဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့အားဆေးတွေကို ဆက်မသောက်တော့ဘဲ နောက်ဆေးကဒ် အသစ်ထပ်သောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ သောက်ဖို့မေ့မေ့ ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းလေးတွေသိပြီဆိုပေမဲ့ ခဏခဏမေ့လို့တော့အဆင်မပြေပါဘူး။
ဆေးသောက်ဖို့ ပျက်ကွက်တာကြောင့် တစ်လမပြည့်သေးဘဲ ရာသီလာတာ ၊ ကိုယ်ဝန်တားတဲ့အာနိသင်လျော့ကျပြီး မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မေ့တတ်တဲ့ သူဆိုရင် ၃လ ထိုးဆေး ။ လက်မောင်းတွင်းထည့် သားဆက်ခြားနည်း ၊ သားအိမ်ထဲထည့် သားဆက်ခြားနည်းတွေကို ပိုပြီးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ယောင်းတို့အတွက် အကြံပေးချင်တာက တားဆေးသောက်မယ်ဆိုရင် အချိန်မှန်လေးသတ်မှတ်ပြီး (ဥပမာ … ည ၈ နာရီ ထမင်းစားပြီးချိန်)လောက် ဖုန်းနဲ့ Alarm လေးပေးပြီးသောက်နိုင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့ဆန္ဒပြုရင်း
တဈရကျသောကျဖို့မသှေ့ားရငျ နှဈလုံးပူးတဈပွိုငျတညျး သောကျလိုကျရမှာလား
အလုပျမြားတဲ့ ခတျေ ၊ အပွိုငျအဆိုငျမြားတဲ့ခတျေကွီးမှာ တဈနတေ့ဈလုံးသောကျရတဲ့ တားဆေးကိုသောကျဖို့ ယောငျးတို့အနနေဲ့ စဉျးစားရမှာ တဈခုရှိပါတယျ။ ” ငါ တဈနတေ့ဈလုံး ဆေးပုံမှနျသောကျနိုငျရဲ့လား? ” ” မမမေ့လြော့ရော သောကျနိုငျရဲ့လား?” ဒါတှကေိုစဉျးစားပွီးမှ တားဆေးသောကျသငျ့ပါတယျ။ တားဆေးရဲ့ သဘာဝအရ ပွငျပဟျောမုနျးနဲ့ မြိုးဥမကွှအေောငျလုပျပေးထားတာမို့ ပုံမှနျဆေးသောကျမှသာ ကိုယျဝနျတားတဲ့ အာနိသငျရစတောမို့ပါ။
ယောငျးတို့အနနေဲ့ ဆေးတဈနတေ့ဈလုံးသောကျဖို့ကတော့ အဆငျပွပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သောကျဖို့ မတေ့ာနဲ့ ကိုယျဝနျရသှားမှာလားဆိုရငျ?? တားဆေးသောကျဖို့ တဈရကျမသှေ့ားတယျ။ ( တားဆေးတဈလုံးမသောကျမိဘူးဆိုရငျ) – သိသိခငျြးအခြိနျမှာ မသှေ့ားတဲ့အလုံးကိုသောကျပါ။ အရငျညက သောကျဖို့ဆေးကို မနကျမှ သတိရရငျ သတိရတဲ့အခြိနျမနကျမှာ မတေဲ့အလုံးကိုသောကျပါ။ ပုံမှနျသောပျနကြေ ညဘကျမှာလညျး တဈလုံးထပျသောကျပါ။ အဲ့ဒီနအေ့တှကျတော့ နှဈလုံးဖွဈသှားမှာပါ။
တားဆေးသောကျဖို့ နှဈရကျမတေ့ယျဆိုရငျ – သိသိခငျြးမှာ ဆေးတဈလုံးပွနျသောကျပါ။ အဲ့ရကျမှာပဲ ပုံမှနျသောကျနကွေအခြိနျမှာ တဈလုံးပွနျသောကျပါ။ ***သတိထားဖို့က တားဆေးနှဈလုံးမတေ့ာမို့ ကိုယျဝနျမရဖို့ သိပျအာမခံလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ၇ရကျတိတိ လိငျဆကျဆံခွငျးမပွုဘဲနတော ။ ကှနျဒုံးသုံးပွီးဆကျဆံတာတှနေဲ့ ထပျပွီးကာကှယျရမှာပါ။
နောကျသိထားရမယျ့အခကျြကတော့ တားဆေးကဒျရဲ့ ၃တနျးမွောကျမှာ ဆေး ၂ရကျသောကျဖို့မတေ့ာဆိုရငျတော့ ၃တနျးကို ကုနျတဲ့အထိသောကျပွီးတာနဲ့ အားဆေးပါဝငျတဲ့ အောကျဆုံးအတနျးကိုမသောကျဘဲ နောကျကဒျအသဈသောကျရမှာဖွဈပါတယျ။ တားဆေးသောကျဖို့ ၃ ရကျမပွေီ့ဆိုရငျ – သိသိခငျြးမှာ တဈလုံးသောကျပွီး ကနျြတာတှကေို ပုံမှနျအတိုငျးဆကျသောကျပေးပါ။ * ဒီလိုမမေ့ယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျရနိုငျခွမြေားတာမို့ ၇ရကျတိတိ လိငျဆကျဆံခွငျးမပွုဖို့ ကှနျဒုံးသုံးပေးဖို့လိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အရေးပျေါတားဆေးသောကျဖို့လညျး လိုအပျနိုငျတာမို့ ဆရာဝနျနဲ့လညျးသှားရောကျဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။
တကယျလို့ ၃လုံးမတေ့ာဟာ ဆေးကဒျရဲ့ တတိယအတနျးမှာဆိုရငျတော့ ကနျြတဲ့အားဆေးတှကေို ဆကျမသောကျတော့ဘဲ နောကျဆေးကဒျ အသဈထပျသောကျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲ သောကျဖို့မမေ့ေ့ ဖွရှေငျးဖို့နညျးလမျးလေးတှသေိပွီဆိုပမေဲ့ ခဏခဏမလေို့တော့အဆငျမပွပေါဘူး။
ဆေးသောကျဖို့ ပကျြကှကျတာကွောငျ့ တဈလမပွညျ့သေးဘဲ ရာသီလာတာ ၊ ကိုယျဝနျတားတဲ့အာနိသငျလြော့ကပြွီး မတျောတဆ ကိုယျဝနျရသှားတာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ မတေ့တျတဲ့ သူဆိုရငျ ၃လ ထိုးဆေး ။ လကျမောငျးတှငျးထညျ့ သားဆကျခွားနညျး ၊ သားအိမျထဲထညျ့ သားဆကျခွားနညျးတှကေို ပိုပွီးရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။ ယောငျးတို့အတှကျ အကွံပေးခငျြတာက တားဆေးသောကျမယျဆိုရငျ အခြိနျမှနျလေးသတျမှတျပွီး (ဥပမာ … ည ၈ နာရီ ထမငျးစားပွီးခြိနျ)လောကျ ဖုနျးနဲ့ Alarm လေးပေးပွီးသောကျနိုငျပါတယျ။ ယောငျးတို့ ကနျြးမာပြျောရှငျဖို့ဆန်ဒပွုရငျး
Tags: alarm, birth control pill, condon, Forget, pill
မယ်တင် (ဆေး-၁) March 26, 2019
သတိမထားဘဲ ပြောနေတတ်ကြတဲ့ အသုံး အများဆုံး အင်္ဂလိပ်မွေးစားစကားလုံးများ
Myat Moe November 2, 2018
Aye Mon Kyaw May 21, 2018
Hnin Ei Oo May 18, 2018